I-Calcite e-Hydrochloric Acid
I-Acid Test. Andrew Alden
Yonke ingqungquthela yesimo senzululwazi yendawo yithwala ibhotile encinci ye-10 ekhulwini ye- hydrochloric acid ukwenzela uvavanyo olukhawulezayo lwimihlaba, elisetyenziselwa ukwahlula iindawo eziqhelekileyo ze-carbonate, i- dolomite kunye ne- limestone (okanye i- marble , enokuthi iqulethwe ngamaminerali). Amaconsi ambalwa e-asidi afakwa kwidwala, kwaye i-limestone iyaphendula ngokukhupha ngamandla. Ii-Dolomite fizzes kuphela ngokukhawuleza. Nazi ezinye iimifanekiso ezenziwe kwisimo esilawulwayo.
I-Hydrochloric acid (i-HCl) ifumaneka kwiivenkile ze-hardware njenge-muriatic acid, ukuze zisetyenziswe ekucoceni amacaka ukusuka kwikhonkrithi. Ukusetyenziswa kwintsimi ye-geological, i-asidi iyahlanjululwa kwi-10 yeepesenti amandla kwaye igcinwe kwibhotile encinci ene-eyedropper. Eli galari libonisa nokusetyenziswa kweviniga yasendlini, ehamba ngokukhawuleza kodwa efanelekileyo kubaxhasi okanye abasebenzisi abanomtsalane.
I-Calcite eyenza i-chip ye- marble fizzes ngamandla kwi-10% yesisombululo se-hydrochloric acid. Impendulo ihamba ngokukhawuleza kwaye ayinakunakwenzeka.
I-Dolomite kwi-Acrochloric Acid
I-Dolomite esuka kwi-chip of marble fizzes ngokukhawuleza, kodwa ngobumnene, kwisisombululo se-HCl se-10.
I-Calcite kwi-Acetic Acid
Iibhakethi ze- calcite ukusuka kwibhodi ye-geode ngamandla kwi-asidi, nakwi-acetic acid njengale viniga. Esi shintshi se-asidi sifanelekile kwimiboniso yamagumbi okufundela okanye i-geologists kakhulu.
Siyazi ukuba yi-carbonate ngobunzima bayo (malunga ne-3 kwinqanaba le- Mohs ) kunye nokuba i- calcite okanye i- dolomite ngumbala wayo kunye nokucoceka kakhulu. Yintoni na?
Uvavanyo lwe-Calcite luhluleka
Iimaminerali zifakwa kwi-asidi. Amachule e-calcite kalula kwi-acid ebandayo. Oku akuko kubalwa. (ngaphezulu ngaphantsi)
Iimigodi ezimhlophe eziqhelekileyo kwiqela lebali liyakwenza ngokungafaniyo kubanda kunye ne-asidi eshushu, ngolu hlobo:
I-Calcite (CaCO 3 ): iimbumba ezinamandla kwi-acid ebandayo
Magnesite (MgCO 3 ): iimbumba kuphela kwi-asidi eshushu
I-Siderite (FeCO 3 ): iimbumba kuphela kwi-asidi eshushu
U-Smithsonite (ZnCO 3 ): iibhobho kuphela kwi-asidi eshushu
I-Calcite yinto eqhelekileyo kakhulu kwiqela le-calcite, kwaye nguyena kuphela ojonge ngokufanayo njenge-specimen yethu. Nangona kunjalo, siyazi ukuba ayikho i-calcite. Ngamanye amaxesha i-magnesite ivela kwimimandla emhlophe yegranular njenge-specimen yethu, kodwa ummangali oyintloko ngumdonomite (CaMg (CO 3 ) 2 ), engekho kwintsapho yabalo. It bubbles weakly kwi-asidi ebandayo, kakhulu kwi-asidi eshushu. Ngenxa yokuba sisebenzisa uviniga obuthakathaka, siza kutshabalalisa i-specimen ukwenzela ukuphendula ngokukhawuleza.
ICrobate Carbonate Mineral
Imfihlakalo engummangaliso iphantsi komhlaba. Qaphela i- rhombs eyenziwe kakuhle , uphawu oluqinisekileyo lwe-carbonate amaminerali.
I-Dolomite kwi-Acetic Acid
Ubuninzi bomdumba obunamadolomite ngobumnandi kwi-hydrochloric acid kunye (njengoko kuboniswe apha) kwiviniga eshisayo. I-hydrochloric acid ikhethwa kakhulu ngenxa yokuba impendulo nge dolomite iyancipha.
Iyiphi Inambuzane Eyona Ninzi Yehlabathi?
Funda indlela yokuhamba ngomkhumbi omncinci - 1. IiNgxenye zeBhekile